Volcano Agung, Bali, Indonesia " Journey-Assist - Mahaliana any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Volkano Agung (Gunung Agung)
Volkano Agung (Gunung Agung)
Volkano Agung (Gunung Agung). Fihaonana an-tampon'ny Bali
Topimaso momba ny volkano Agung (Gunung Agung)
Haavo - 3142m
Kava (savaivony) - 500m
Volapoky Volkano: Stratovolcano
Karazana fipoahana: Miharihary
Agung dia iray amin'ireo volkano miasa 2 any Bali. Any atsinanan'ny nosy no misy azy. Agung no toerana avo indrindra any Bali. Manana haavo 3 m izy.
Mahatratra 500 m ny sakany. Saika tsy misy zavamaniry eo an-tampon'ny Agung.
Hetsika volokano (tantara mitohy)
1963 Ny farany, ho an'ny anio, dia nisy fipoahana mafy sy mampidi-doza amin'ity volkano ity tamin'ny 1963. Avy eo dia natsipy ny vongan-tsiranoka pyroclastic (fifangaroana vato-lavenona), nidina koa ny lahara (fotaka manakaiky ny tongotra volkano), izay nahatonga ny fahafatesan'ny mponina 1 teo amin'ny nosy.
2017 Tamin'ny faran'ny fahavaratry ny taona 2017 (Aogositra) dia voarakitra ny hetsiky ny volkano, izay misy olona maherin'ny zato nafindra toerana ary nakatona ny seranam-piaramanidina. Saingy taorian'ny roa volana dia nihena ny hetsika ary niverina tamin'ny fomba fanaony taloha ny zava-drehetra. Saingy tamin'ny 21.11.2017 Novambra 700, tampoka dia nifoha indray i Agung ary niditra tamin'ny dingana nivoahan'ny fipoahana. Setroka misy setroka misy haavo 4 metatra ny haavony, ary rehefa afaka 25.11.2017 andro (XNUMX/XNUMX/XNUMX) dia nifindra tany amin'ny dingana manaraka ilay volkano, niaraka tamin'ny famoahana ny magma teny amboniny. Izany rehetra izany dia tsy nisy olona maty. Natory indray ilay volokano.
2.07.2018/7/XNUMX, nifoha tampoka i Agung ary tao anatin'ny XNUMX minitra dia nanoratra ny fipoahana ny seismologists. Tsy nisy ny naratra
25.052019/2020/4,5, nisy ny fipoakan'ny volkano farany hatreto (XNUMX) tamin'ny famoahana lava sy vato mafana. Naharitra XNUMX minitra ny fipoahana. Saingy satria i Agung dia naneho famantarana ny fiainana nandritra ny volana maro, dia vonona ny amin'izany ny rehetra, ary tsy nisy naratra.
Mpizaha tany maro no tsy voafetra amin'ny fiderana an'i Agung eo akaikin'ny tongony, ka handresy ny tampon'ny volkano. Rehefa dinihina tokoa, dia hitanao ny fiposahan'ny masoandro mahafinaritra be dia be. Saingy mila fiomanana ara-batana kely izany. Raha marary ara-batana sy / na manana olana ara-pahasalamana lehibe ianao, dia mety hivadika fitsapana mampidi-doza io fiakarana io.
Ny fandresena an'i Agung tsy misy fanampian'ny mpitari-dalana dia kivy mafy, satria mampidi-doza izaitsizy ny fanandramana tsy miankina. Ny mpizahatany sasany dia mino fa ny mpitari-dalana avy amin'ny mponina ao an-toerana, amin'ny fikatsahana vola, dia nanangana rafitra iray feno heloka bevava iray, miasa matetika eo am-pototra eo am-piandrasana ireo mpizahatany. Marina izany amin'ny ampahany, saingy na eo aza izany, maro ny fanandramana niakatra an-tampon'ilay tampon'isa ho an'ny vahiny nifarana tamin'ny fomba mampalahelo.
Làlana mankany Agung
Misy làlana lehibe 2 mankany an-tampony:
Avy amin'ny tempolin'i Pura Besakih, izay eo amin'ny tehezan'ilay volkano etsy ambany, amin'ny ilany andrefana.
Avy amin'ny tanànan'i Selat, miorina amin'ny làlana manasaraka ny tanànan'ny Karangasem sy Redang.
Iray amin'ireo làlana fitsangatsanganana tamin'ny fandresen'i Agung (avy amin'ny tempolin'i Pura Besakih), azonao jerena amin'ny sari-tany eo amin'ny faran'ny pejy. Azonao atao koa ny misintona an'ity fanarahan-dia ity raha hampiasaina amin'ny navigator GPS rehetra.
adiresy: Jungutan, Bebandem, Karangasem, Bali, Indonesia
Ny vidin'ny serivisy ho an'ny top of Agung dia manomboka amin'ny $ 40.
Sarin'ny volkano Agung
Volkano Agung (ankavanana)
Volkano Agung (Gunung Agung). Fihaonana an-tampon'ny Bali.
Volkano Agung (Gunung Agung). Eo an-tampony
Mount Agung amin'ny sarintany